Milaza Ny Heviny Manoloana Ny “Queers” Ny Minisiteran’ny Raharaham-Bahiny Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2014 18:14 GMT
Tamin'ny 14 Janoary 2014, roa taona misesy izay, ny Minisiteran'ny Raharaham-Bahiny Rosiana no namoaka ny tatitra [ru] momba ny zon'olombelona ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Izao fanapahan-kevitra izao moa dia tahaka ny valy bontana amin'ny tatitra (mitsikera matetika) ataon'ny Vondrona Eoropeana nandritra ny taona maro momba ny zon'olombelona any Rosia. Novononina tamin'ny endrika Word, amin'ny fiteny roa dia ny fiteny Rosiana sy ny “dikany tsy amin'ny fomba ofisialy” ho amin'ny fiteny anglisy, ao amin'ny tranonkalan'ny Minisitera ny tatitra nampitondraina ny lohateny hoe “Tatitra momba ny toetry ny Zon'Olombelona ao amin'ny Vondrona Eoropeana.
Raha nomarihana ho “tsy ofisialy” ny dikanteny, dia somary nihemotra ihany ny mpanara-baovaon'i Rosia raha mahita fa mety miafara eny amin'ny tranonkalan'ny governemanta izany ompa famelezana pelaka izany. Maneho ny heviny ny mpanoratra Oliver Bullough: